Mkpụrụ vaịn na, Champagne Out: Olee otú AI si agbanwe Funnel Sales | Martech Zone
Mkpụrụ vaịn dị na, Champagne Out: Kedu ka AI si agbanwe oghere ahịa
Tọzdee, Febụwarị 17, 2022 Tọzdee, Febụwarị 17, 2022 Jonathan Spier
Lee ọnọdụ nke onye nrụpụta mmepe ire ahịa (SDR). Ndị na-eto eto na ọrụ ha na-adịkarị mkpụmkpụ na ahụmahụ, SDR na-agbalịsi ike ịga n'ihu na ahịa org. Otu ọrụ ha bụ: weta atụmanya iji mejupụta pipeline.
Ya mere, ha na-achụ nta na ịchụ nta, ma ha enweghị ike ịhụ ebe kacha mma ịchụ nta. Ha na-emepụta ndepụta nke atụmanya ha chere na ọ dị mma ma ziga ha n'ime oghere ahịa. Mana ọtụtụ n'ime atụmanya ha adabaghị, kama nke ahụ, na-emechi oghere ahụ. Nsonaazụ dị mwute nke nchọ a na-agwụ ike maka nnukwu ndu? N'ihe dị ka 60% nke oge, SDR anaghị eme oke ha.
Ọ bụrụ na ọnọdụ a dị n'elu na-eme ka mmepe ahịa atụmatụ dị ka enweghị mgbaghara dị ka Serengeti nye nwa ọdụm na-enweghị mgbei, ma eleghị anya, agara m n'ebe dị anya na ihe atụ m. Ma isi okwu ahụ guzoro: ọ bụ ezie na SDR nwere "mile mbụ" nke ahịa ahịa, ọtụtụ n'ime ha na-agbasi mbọ ike n'ihi na ha nwere otu n'ime ọrụ kachasị sie ike na ụlọ ọrụ na ngwá ọrụ ole na ole iji nyere aka.
Gịnị kpatara? Ngwá ọrụ ndị ha chọrọ adịghị adị ruo ugbu a.
Kedu ihe ọ ga-ewe iji napụta maịl mbụ nke ahịa na ire ahịa? Ndị SDR chọrọ teknụzụ nwere ike ịchọpụta atụmanya ndị dị ka ezigbo ndị ahịa ha, chọpụta ngwa ngwa dabara adaba ndị ahụ, wee mụta ịdị njikere ha ịzụta.
Megharia n'elu oghere
Ngwá ọrụ bara ụba dị iji nyere ndị otu ahịa na ndị na-ere ahịa aka jikwaa ụzọ n'ime oghere ahịa niile. Usoro njikwa mmekọrịta ndị ahịa (CRM) dị mma karịa mgbe ọ bụla na nsuso azụmaahịa dị ala. Ịre ahịa dabere na akaụntụ (ABM) ngwaọrụ dị ka HubSpot na Marketo emewo ka nkwurịta okwu dị mfe na atụmanya na etiti etiti. Na-ebuli oghere ahụ elu, nyiwe ntinye aka ahịa dị ka SalesLoft na Outreach na-enyere aka itinye ụzọ ọhụrụ.
Ma, 20-gbakwunyere afọ mgbe Salesforce bịara na ebe ahụ, nkà na ụzụ dị n'elu olulu-ebe ahụ tupu ụlọ ọrụ mara onye ọ kwesịrị ịtụle ịgwa ya okwu (na ebe ndị SDR na-achụ nta ha) - nọgidere na-ada mbà. O nwebeghị onye megoro maịl mbụ, ma.
Ọ dabara nke ọma, nke ahụ na-achọ ịgbanwe. Anyị nọ na njedebe nke nnukwu ebili mmiri nke mmepụta ngwanrọ azụmahịa. The ife bụ artificial ọgụgụ isi (AI). AI bụ nnukwu ebili mmiri nke anọ nke ihe ọhụrụ n'ọgbọ egwuregwu a n'ime afọ 50 gara aga (mgbe ebili mmiri nke 1960 gachara; mgbanwe PC nke 1980s na 90s; na ebili mmiri nke sọftụwia kwụ ọtọ dị ka ọrụ.SaaS) nke na-enyere ụlọ ọrụ aka ịme ka usoro azụmahịa dị mma na nke ọma na ngwaọrụ ọ bụla-enweghị nkà nzuzo achọrọ).
Otu n'ime ọtụtụ àgwà kachasị mma nke AI bụ ike ya ịchọta ụkpụrụ na mpịakọta galactic nke ozi dijitalụ anyị na-achịkọta, ma jiri data ọhụrụ na nghọta sitere na ụkpụrụ ndị ahụ mee ka anyị nwee ike. Anyị enwetalarị uru site na AI na oghere ndị ahịa-ma na mmepe nke ọgwụ mgbochi COVID-19; ọdịnaya anyị na-ahụ site na ozi ọma na ngwa mmekọrịta na ekwentị anyị; ma ọ bụ ka ụgbọ ala anyị si enyere anyị aka ịchọta ụzọ kacha mma, zere okporo ụzọ na, n'ihe banyere Tesla, nyefee ọrụ ịkwọ ụgbọala n'ezie na ụgbọ ala.
Dịka ndị na-ere B2B na ndị na-ere ahịa, anyị ka na-amalite ịhụ ike AI na ndụ ọkachamara anyị. Dịka ụzọ onye ọkwọ ụgbọ ala ga-eburu n'uche okporo ụzọ, ihu igwe, ụzọ na ihe ndị ọzọ, ndị SDR anyị chọrọ maapụ nke na-enye ụzọ kacha nso iji chọta nnukwu atụmanya na-esote.
Onye ọ bụla SDR na onye na-ere ahịa maara na ịmepụta ntụgharị na ire ere, ị na-atụ anya atụmanya ndị dị ka ndị ahịa gị kacha mma. Ọ bụrụ na ndị ahịa gị kacha mma bụ ndị na-emepụta akụrụngwa ụlọ ọrụ, ị ga-ahụkwu ndị na-emepụta akụrụngwa ụlọ ọrụ. N'ọchịchọ iji nweta ihe kacha mma na mbọ ha na-apụ apụ, ndị otu ụlọ ọrụ na-abanye n'ime firmographics - ihe dịka ụlọ ọrụ, nha ụlọ ọrụ na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ.
Ndị SDR kacha mma mara na, ọ bụrụ na ha nwere ike gosipụta akara dị omimi banyere otu ụlọ ọrụ si eme azụmahịa, ha ga-enwe ike ịchọta atụmanya ndị nwere ike ịbanye n'ahịa ahịa. Mana kedu akara ngosi, gafere firmographics, ka ha kwesịrị ịchọ?
Mpempe egwuregwu na-efu efu maka SDR bụ ihe a na-akpọ data exographic - nnukwu data nke na-akọwa ụzọ ahịa ụlọ ọrụ, atụmatụ, usoro nnye ọrụ, na ndị ọzọ. Data exographic dị na breadcrumbs n'ofe ịntanetị. Mgbe ị tụgharịrị AI na achịcha ndị ahụ niile, ọ na-achọpụta usoro na-atọ ụtọ nke nwere ike inyere SDR aka ịghọta ngwa ngwa ka atụmanya dabara na ndị ahịa gị kacha mma.
Dịka ọmụmaatụ, were John Deere na Caterpillar. Ha abụọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ igwe na akụrụngwa Fortune 100 na-ewe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 100,000. N'ezie, ha bụ ihe anyị ga-akpọ "ejima firmographic" n'ihi na ụlọ ọrụ ha, nha, na ọnụ ọgụgụ isi ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu! Ma Deere na Caterpillar na-arụ ọrụ dị iche iche. Deere bụ onye nkuchi teknụzụ etiti oge yana onye nkuchi igwe ojii nwere mgbado B2C. Caterpillar, n'ụzọ dị iche, na-erekarị B2B, bụ onye na-anabata teknụzụ ọhụrụ, ma nwee nnukwu nkuchi igwe ojii. Ndị a exographic iche na-enye ụzọ ọhụrụ iji ghọta onye nwere ike ịbụ ezigbo atụmanya na ndị na-adịghị - ya mere ụzọ dị ngwa ngwa maka SDRs ịchọta atụmanya ha kacha mma.
Ịdozi Nsogbu Mbụ-Mile
Dị nnọọ ka Tesla na-eji AI iji dozie nsogbu dị elu maka ndị ọkwọ ụgbọ ala, AI nwere ike inyere ndị otu mmepe ahịa aka ịmata atụmanya dị ukwuu, gbanwee ihe na-eme n'elu olulu ahụ, ma dozie nsogbu mbụ-mile nke ịzụ ahịa na-alụ ọgụ kwa ụbọchị.
Kama profaịlụ ndị ahịa na-adịghị ndụ (ICP), were ya na ngwaọrụ na-etinye data exographic ma jiri AI kpughee ụkpụrụ n'etiti ndị ahịa kacha mma nke ụlọ ọrụ. Wee were were were data ahụ mepụta ụdị mgbakọ na mwepụ nke na-anọchi anya ndị ahịa gị kacha mma—kpọọ ya Profaịlụ ndị ahịa ọgụgụ isi Artificial (aiCP) - na itinye ihe nlereanya ahụ iji chọta atụmanya ndị ọzọ dị ka ndị ahịa kacha mma. AiCP siri ike nwere ike itinye ozi firmographic na teknụzụ yana isi mmalite data nkeonwe. Dịka ọmụmaatụ, data sitere na LinkedIn yana data ebumnuche nwere ike ịkwado aiCP. Dị ka ihe nlereanya ndụ, aiCP na-amụta oge n'aga.
Ya mere, mgbe anyị jụrụ, Kedu onye ga-abụ onye ahịa anyị kacha mma?, anyị adịghịzi mkpa ịhapụ SDRs ka ha na-elekọta onwe ha. Anyị nwere ike n'ikpeazụ ịnye ha ngwá ọrụ ha chọrọ iji zaa ajụjụ a ma dozie nsogbu dị n'elu oghere. Anyị na-ekwu maka ngwaọrụ ndị na-ebuga atụmanya ọhụrụ na-akpaghị aka ma nye ha ọkwa ka ndị SDR wee mara onye ha ga-ezubere iche na ndị otu mmepe ahịa nwere ike bute mbọ ha ụzọ. N'ikpeazụ, AI nwere ike iji nyere ndị SDR anyị aka ịmepụta oke-na atụmanya ndị dabara adaba maka ụdị atụmanya anyị chọrọ ịchọta-ma dịrị ndụ na-atụ anya ụbọchị ọzọ.
Rev Platform mmepe ire ere
Platform mmepe ire ere (Rev's Sales Development Platform)RDS) na-eme ngwa ngwa nchọta atụmanya na-eji AI.
Nweta ihe ngosi Rev
Tags: aiai ahịa profaịlụakpprofaịlụ ndị ahịa ọgụgụ isi artificialb2bb2b onu mmirikatapilaexographicdata exographicfirmagraphic dataichiJohn deereteknụzụ ire erena naansogbu nke mile mbụ
Jonathan Spier bụ CEO nke Rev. O nwere ihe karịrị afọ 20 nke ahụmahụ na-ewu ụlọ ọrụ ndị na-edu ndú, gụnyere ọrụ abụọ gara aga dị ka onye isi na-akwado nkwado na NetBase na PLAE. Spier nwere nzere bachelọ na Sayensị Kọmputa na nkwanye ugwu sitere na UC Berkeley yana MBA nwere nsọpụrụ sitere na Harvard Business School. Nwa afọ San Diegan, Spier nwere obi ụtọ ịbụ akụkụ nke mpaghara teknụzụ n'obodo ya.
Ndụmọdụ SEO nke 6 na-agbanwe egwuregwu: ka azụmahịa ndị a si mee ka okporo ụzọ Organic gaa ndị ọbịa 20,000+ kwa ọnwa